Wallpaper 3D ho an'ny Android, mahavariana! | Androidsis
ny sary mihetsika mahafinaritra, fantatra ihany koa amin'ny anarany anglisy amin'ny anarana hoe wallpaper, ireo sary izay ho hitantsika in-jato isan'andro. Noho izany antony izany dia mazàna no soloiko ny solosainako isaky ny adiny ary amin'ny findaiko dia ovako tanana isaky ny kelikely. Azontsika atao ny mampiasa saika na inona na inona, toa Wallpaper 3d, izay tsy midika hoe mandao ny efijery izy ireo, fa izy ireo dia volavola izay manahaka ny halalin'izy ireo.
Eto amin'ity pejy ity ianao dia hahita safidy maro sy tena tsara, manomboka amin'ny iray galeria misy sary izay nangoninay taloha ela be ary nifarana tamin'ny tranokala maro izay ahitanao endrika izay tianao. Etsy ambany no misy ny galerie misy sary noresahiko teo aloha sy pejy web izay ahitanao safidy hafa.
1 Gallery of 3D sary
2 Pejy hahitana sary 3D
2.1 HD Wallpaper
Gallery of 3D sary
Pejy hahitana sary 3D
HD Wallpapers dia tranokala iray ahitantsika sary mihetsika maro. Anisan'ny vola atolotry ity tranonkala ity, ary izany no antony ampidirana azy ato amin'ity lisitra ity, misy fizarana miaraka abstract sy 3D fiaviana. Raha izaho manokana dia tiako ho sarahina ireo hevitra roa tonta, saingy hey, marina ihany koa fa misy fakan-tsary mahaliana sasany izay tokony hojerena.
Ny tena tiako indrindra amin'ny tranokala HD Wallpapers dia ny ankaviantsika manana safidy hisafidy ny fomba itiavantsika azy ny endrika sary, izay ahafahantsika misafidy ny mombamomba ny fitaovana finday na amin'ny HD.
Rohy mankany amin'ny môtô 3D fitenio.in
Saika ny zava-drehetra nolazainay momba ny HD Wallpapers dia mety amin'ny tranokala Wide Wallpapers. Eny, mety tsy manana safidy toy izany aho eo imasoko (na dia izany aza) ny miditra na miditra mivantana amin'ny endrika sary iray, saingy mieritreritra aho ny katalaogin'ity tranonkala faharoa ity, farafaharatsiny amin'ny resaka 3D, dia izy ambony indrindra a amin'ny tranonkala napetrako teo amin'ny toerana voalohany. Na dia izany aza ny hevitro. Topazo maso dia hahita ianao.
Rohy mankany amin'ny atiny 3D wallpaperwide.com
Pejy iray izay havaozina be dia be miaraka amin'ny atiny marobe, na dia efa nijanona talohan'ny fahavaratra aza ity fizarana ity dia ny Wallpaper FX. Manana iray izy ireo fizarana misy fiaviana 3D maro, na dia maro amin'ireo sary any ivelany aza dia sary tena izy Mazava ho azy, na ny tena sary aza dia natao hitovy amin'ny hivoahany amin'ny efijery misy ny fitaovantsika. Raha fintinina, tranonkala iray hafa izay mendrika ny mandray kaonty hitadiavana vola ho an'ny android kely.
Wallpaper 3D misimisy kokoa ao wallpaperfx.com
Raha ny zavatra tadiavinao dia sary marobe ka mety ho very ianao, izay tadiavinao dia antsoina hoe HD Wallpaper Backgrounds. Izy io dia pejy web manana faritra maro ary ny tsirairay amin'izy ireo dia manolotra vola be ho antsika. Mihatra amin'ny sary 3D ihany koa io, izay, ohatra, manana ny fizarana sary ho an'ny solosaina, fiaviana HD, fiaviana voninkazo, sary (an'ireo manga sy mena) na endrika, ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo amin'ny 3D.
Mandehana any tvwallpaperbackgrounds.net
Raha noheverinao fa vita tamin'ny pejy izahay dia diso ianao. Ny safidy tsy mandratra ary WallpaperStop dia iray hafa manolotra antsika ny sary nosarahana fizarana Abstract, Art Digital, Fantasy, Fractal ary Vector. Amin'ireo fizarana teo aloha, ny tiako indrindra dia ny atiny abstract sy ny fraktal.
Link | wallpapertop.com
Ary tsy ho pejy amin'ny teny anglisy daholo ny zava-drehetra, sa tsy izany? Mifarana amin'ny Fonditos izahay, pejy web iray amin'ny teny espaniola izay ananantsika ihany koa ny fiaviana 3D nisaraka fizarana, amin'ity tranga ity dia ny Biby, Landscapes, Character, Robots, Vehicles ary hafa.
Mazava ho azy, manokana aho hanome azy ireo tehamaina kely amin'ny tanana ho an'ny famolavolana ny tranonkala; Aleoko fa ny sary dia hita fa tsy mila miditra ao.
rohy | www.fonditos.com